गुट फ्युजनतर्फ वामदेवको ‘मुभ’, शक्ति संघर्ष चर्किने संकेत – Everest Dainik
गुट फ्युजनतर्फ वामदेवको ‘मुभ’, शक्ति संघर्ष चर्किने संकेत
२०७५, २४ आश्विन बुधबार
एभरेष्ट टिप्पणी । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता वामदेव गौतम काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं. ७ बाट निर्वाचन लड्ने कुराले अहिले बजार तातेको छ । कतिपयले वामदेवको यो कदमको आलोचना गरेका छन भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र भने नयाँ ढंगको शक्ति संघर्ष चर्किने आशंका पनि कतिपयले गरेका छन् ।
ओली पनि सहमत ?
वामदेवको अहिलेको ‘मुभ’ले एउटा लामो समय पार गरेको छ । बदिर्याबाट पराजित भएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिकाविहिन बनेका वामदेवको आवश्यकता सरकार र सदनमा धेरैले रोजे पनि । यही बीचमा वामदेवले सांसद बन्न खोजेको कुरा सार्वजनिक भयो ।
शुरुमा डोल्पाबाट निर्वाचन लड्ने कसरत अघि बढ्यो । डोल्पाका सांसद धनबहादुर बुढाले आफूले वामदेवका लागि निर्वाचन क्षेत्र खाली गर्ने बताए । तर पार्टीभित्रकै एकथरिको दबाब थेग्न नसकेर उनले राजिनामा दिन सकेनन् । यो दबाब के थियो भन्ने कुरा सार्वजनिक भएन् । आशंका के मात्रै भयो भने वामदेव सांसद बन्ने कुरा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली समूहले रुचाएका थिएनन् ।
पूर्वएमाले समूहभित्रका चार जना मुख्य हस्तीहरु केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमबीचको घोषित अघोषित शक्ति संघर्ष हेर्दा वामदेवको यो कदम सामान्य सांसद बन्ने चाहना मात्रै भएको निश्कर्ष निकाल्न सकिन्न ।
ओली समर्थकहरुले सार्वजनिकरुपमा नै वामदेव सांसद हुने कुराको बिरोध गरे । डोल्पाबाट शुरुमा सीट खालि दिने भनेपछि पछि गएर सांसद बुढा आफ्नै कुराबाट पछि हटनुका पछाडि यही ओली समूहको दबाब रहेको समेत धेरैले टिप्पणी गरे ।
तर श्रोत भन्छ, औपचारिक बैठकहरुमा यो विषयले प्रवेश पाएपछि अध्यक्ष ओलीले भने बिरोध गरेका थिएनन् । “ठीकै छ, कोहीले आफू छोड्न चाहन्छ र अर्कोले चुनाव लड्न चाहन्छ भने त्यसमा मेरो असहमति हुन्न ।” बैठकमा उनको यस्तै आसय रहेको श्रोत बताउँछ ।
त्यसो हो भने वामदेवको मुभलाई ‘ओलीको प्रतिस्थापन’सँग जोडेर गरिएको टिप्पणी र चर्चाहरु गलत हुन त ? केही अन्य तथ्यहरुले भने यस्तो निश्कर्षमा पुग्न दिँदैनन् । खासगरी नेकपाभित्र पूर्वएमाले समूहभित्रका चार जना मुख्य हस्तीहरु केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमबीचको घोषित अघोषित शक्ति संघर्ष हेर्दा वामदेवको यो कदम सामान्य सांसद बन्ने चाहना मात्रै भएको निश्कर्ष निकाल्न सकिन्न ।
सशंकित माधव नेपाल समूह
वामदेव सांसद बन्दा अध्यक्ष ओलीलाई समस्या पर्छ या पर्दैन ? यो प्रश्न पनि केहीले उठाएका छन् । सोझोरुपमा ‘क्याल्कुलेटिभ पोलिटिक्स’ को भाषा बोल्नेहरुको तर्क छ– वामदेव सांसद बन्छन्, यता सरकार परिवर्तनको हल्ला छ, अनि वामदेव मन्त्री बन्छन्, उस्तै परे प्रधानमन्त्री बन्छन् । त्यो कुराले ओलीलाई संकट पर्छ । त्यसैले धनबहादुर बुढालाई पनि दबाब दिएर फिर्ता गराइयो ।
तर यसको प्रतिवाद गर्नेहरुले भने ओली पक्षका केही नेता र कार्यकर्ताले वामदेवको सांसद बन्ने यो ‘मुभ’को आलोचना गरेपनि यसले ओलीलाई नै फाइदा पुग्ने विश्लेषण समेत गरेको पाइन्छ ।
वामदेवको आफ्नो बेग्लै व्यक्तित्व भएपनि उनले ओली धारलाई समर्थन गर्दैनन् । त्यसले उनको बलियो उपस्थिति आफैले नैतिकरुपमा समर्थन गर्ने नेपाल धारभित्रै बेग्लै उपधारको निर्माणमा सहायक बन्ने भएको कारण नेपाल समूहको ‘पोलिटिकल बार्गेनिङ पावर’मा यसले असर पार्ने छ ।
सामाजिक सञ्जाल र अन्यत्र चलेका चर्चाहरुलाई आधार मान्ने हो भने अहिले वामदेव सांसद बन्दा यसले नेकपाभित्र बलियो र वैचारिकरुपमा संगठित माधव नेपाल समूह नै कमजोर बन्छ । वामदेव गौतमले गुटकै कुरा नगरेपनि वैचारिकरुपमा कतिपय एजेण्डागत हिसाबले माधव नेपाल नजिक देखिन्छन् । यसो हुँदा शक्ति संघर्षमा वामदेवको शक्तिशाली उपस्थिति माधव नेपाल र समूहका लागि असहज हुने उनीहरुको टिप्पणी देखिन्छ ।
तर यो त्यतिबेला सम्म मात्रै सत्य हुन्छ जतिखेर वामदेव सांसद मात्रै या मन्त्रीसम्म बन्छन् । तर प्रधानमन्त्री नै बन्ने उनको लक्ष्य हो भन्ने निश्कर्षमा पुग्दा भने फेरी यो ओली र नेपाल दुबैका लागि असहज अवस्था हुने मान्न सकिन्छ । किनभने वामदेव अगाडि आउनु नै पनि दुबै समूहका लागि समस्याको विषय बन्न सक्छ । तर बढी घाटा माधव नेपाल पक्षलाई नै हुन्छ । किनभने ओली र नेपाल समूह नै अहिले स्पष्ट कित्ताकाट भएका दुई मुख्य धार हुन नेकपाभित्र ।
र, वामदेवको आफ्नो बेग्लै व्यक्तित्व भएपनि उनले ओली धारलाई समर्थन गर्दैनन् । त्यसले उनको बलियो उपस्थिति आफैले नैतिकरुपमा समर्थन गर्ने नेपाल धारभित्रै बेग्लै उपधारको निर्माणमा सहायक बन्ने भएको कारण नेपाल समूहको ‘पोलिटिकल बार्गेनिङ पावर’मा यसले असर पार्ने छ भन्न सकिन्छ ।
त्यसअर्थमा हेर्दा वामदेवको अहिलेको मुभ शक्ति संघर्षमा आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्न हो भन्ने सोझो एकल निश्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । उनले शक्ति खोजेका छन्, उनी गतिशील हुन चाहन्छन् । सदन या सरकारमा उपस्थिति चाहन्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ ।
तर, उनको यो मुभ ओली या माधव नेपाल कसका विरुद्ध परिलक्षित छ भन्ने कुरा निर्वाचनको परिणाम र त्यसअघि हुने अभ्यासले नै स्पष्ट देखाउने छ । निर्वाचन जित्न सिँगो पार्टी र सबै समूहको सहयोग आवश्यक छ । उनले एउटा या अर्को समूहले निर्वाचनमा खुलेर समर्थन र सहयोग नगर्ने अवस्थामा चुनाव जित्न सक्दैनन् । त्यसो भएकोले ओली समूह र नेपाल समूहले उनको पक्षमा कसरी निर्वाचनमा परिचालन गर्छन र सहयोग गर्छन भन्ने कुराबाट वामदेवको उपस्थितिलाई दुबै समूहले कसरी लिएका छन भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ ।
फडके किनाराका साक्षी प्रचण्ड
पूर्व नेकपा एमालेभित्रको शक्ति संघर्ष नयाँ भने होइन । यी चार जना नेताबीच विगत लामो समयदेखि नै आरोप, प्रत्यारोप, आलोचना र अभ्यासको राजनीति हुँदै आएको छ । तर अहिले पूर्व नेकपा एमाले मात्रै छैन । त्यहाँ जोडिएको छ पूर्व माओवादी केन्द्र ।
गुटको अभ्यास चलेपनि संगठितरुपमा नै गुटहरुबीच कित्ताकाट नभएको पूर्व माओवादी केन्द्रसँगको एकताले पूर्व नेकपा एमालेभित्रका यी समूहहरु समेत प्रभावित नहुने कुरा भएन । महाधिवेशन नहुँदा सम्म दुबै पूर्व पार्टीका गुटहरुबीच फ्युजन हुने या एकले अर्कालाई समर्थन गर्ने अवस्था नभएपनि अहिलेको शक्ति संघर्षमा अध्यक्ष प्रचण्डको भूमिकालाई भने धेरैले अर्थपूर्णरुपमा हेरेका छन् ।
प्रचण्डका लागि वामदेव गौतम नजिकका पात्र हुन । जनयुद्दकालदेखि नै वामदेवको सफ्ट कर्नर प्रचण्ड र पूर्व माओवादी केन्द्रसँग रहँदै आयो । यद्यपी नेपाली कांँग्रेससँगको गठबन्धन सरकार बनेपछि भने राजनीतिक एजेण्डाका हिसाबले प्रचण्ड र वामदेवबीचको दूरी बढेको थियो । वामदेवले कतिपय अवस्थामा प्रचण्ड र पूर्व माओवादी केन्द्रको आलोचना समेत गरे । तर यी आलोचनाहरु एजेण्डागत थिए र यसको असर पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया र त्यसपछि भने परेको देखिन्न ।
पार्टी एकतापछि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रचण्ड र केपी ओली नै मुख्यरुपमा क्रियाशील रहेका छन् । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमहरुको भूमिका निर्णायक रहन सकेको छैन । सचिवालयको गठन भएपछि उनीहरु पनि शक्ति प्रक्रियामा देखिए पनि निर्णायक भूमिका अहिले पनि दुबै अध्यक्षको छ ।
यो अवस्थामा अहिले वामदेव सांसद बन्ने कुरामा प्रचण्ड मौन देखिन्छन् । व्यक्तिगतरुपमा वामदेवलाई उनले भरपर्दो नेता मान्न सक्ने भएपनि पार्टीको निर्णय बिना उनले वामदेव या अन्य नेताको मुभमेन्टलाई समर्थन गर्ने देखिँदैन ।
वामदेव सांसद बन्ने कुरामा समेत पार्टीमा छलफल हुँदा ओली र प्रचण्डको फरक मत देखिन्न । कसैले म छोड्छु तिमी लड भन्छ र अर्कोले हुन्छ तिमीले छोड्यौ म लड्छु भन्छ भने त्यो व्यक्तिगत निर्णयलाई पार्टीले सम्मान गर्नुपर्ने मत दुबै अध्यक्षको देखिन्छ ।
अध्यक्षका नाताले सरकारलाई लोकप्रिय बनाउन अर्का अध्यक्षलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने र पार्टीभित्रका सबै तप्कालाई मिलाएर नेकपालाई साँच्चिकै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने चुनौती उनी सामु छ । त्यसैले उनी फडके किनाराका साक्षी बन्दै निर्णायक सारथी बन्ने अवस्थामा छन् ।
सक्रिय संसदीय राजनीतिमा वामदेव आउनुले प्रचण्डलाई पार्टी र अन्य राजनीतिक क्षेत्रमा सहयोग नै पुर्याएपनि यसबाट उनको पोजिसनमा भने कुनै फरक पर्ने देखिँदैन । किनभने प्रचण्डका लागि अहिलेको चुनौती भनेको नयाँ पार्टीलाई एक ढिक्का पार्ने, सबै पक्षलाई सन्तुलनमा ल्याउने, गुटहरु भत्काउने र महाधिवेशनसम्म जाँदा एउटा दृढ संघर्षमुखी कार्यदिशा सहितको बलियो पार्टी बनाउने रहेको छ ।
यो चुनौती पार गर्न उनलाई सक्रिय नेताहरुको खाँचो छ तर गुट या शक्ति संघर्षमा लाग्नु भन्दा पनि सन्तुलनको रणनीति अपनाउँदै गुटहरुको समाप्तीतर्फ पार्टीलाई लैजानु छ । अध्यक्षका नाताले सरकारलाई लोकप्रिय बनाउन अर्का अध्यक्षलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने र पार्टीभित्रका सबै तप्कालाई मिलाएर नेकपालाई साँच्चिकै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने चुनौती उनी सामु छ । त्यसैले उनी फडके किनाराका साक्षी बन्दै निर्णायक सारथी बन्ने अवस्थामा छन् ।
जे होस्, वामदेवको अहिलेको कदमले एकजना सक्रिय राजनीतिज्ञलाई संसदीय प्रक्रियामा उभ्याउने छ । उनी पराजित भएपनि अहिले उनको उपस्थितिले सदन र सरकारका काम कारवाहीमा समेत सकारात्मक योगदान खेल्न सक्ने आशा गर्न सकिन्छ । यद्यपी नेकपा भित्र गुटहरुको अस्तित्वको सवालमा भने शक्ति संघर्ष चर्किने र गुट फ्युजनको नयाँ चरणमा पार्टी पुग्ने आँकलन समेत गर्न सकिन्छ ।
ट्याग्स: Bamdev Gautam
संविधान बदलियो, संस्कार बदल्न सङ्घर्ष गरौंः खानेपानी मन्त्री
भोलिदेखि वर्षा र हिमपात दोहोरिने
साउदिमा पनि मनाइयो २४ औं जनयुद्ध दिवस
विश्वभर छरिएर रहेका समाजसेवीलाई ‘पिस हिरो अवार्ड’ बाट सम्मान
खानेपानी नै उदयपुरगढीको पर्यटन विकासमा जटिल समस्या
स्थानीय तहमा प्रशिक्षण दिदैं कांग्रेस
भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्छः वरिष्ठ नेता पौडेल
अनुहारको चमक बढाउन फेसियलपछि के गर्नुहुँदैन ?
बिग ब्यास लिगः शानदार जित निकाल्दै सन्दीपको टोली फाइनल प्रवेश
कहिले गर्छन् प्रचण्डले अर्को गोल ?
सन्दीप लामिछानले पीएसएलका ३ खेल गुमाउने सम्भावना
विप्लव नेकपाद्वारा बन्दको आव्हान [विज्ञप्तिसहित]
कुकुरसँग यौनसम्पर्क के कारणले हुन्छ ?
स्नातकोत्तर प्रथम वर्षको नतिजा सार्वजनिक
डेस्क संयोजक: गणेश तिवारी
फिचर संयोजक: भुवन निस्तेज